Izandla ezihlanziwe kahle azibheki nje kuphela ukuthi ziyisibonakaliso sesifiso sokujabulisa abanye, kodwa kwezinye izimo ziyimfuneko yokuziphatha nokuziphatha kwekhodi. Iningi lemikhakha yomsebenzi lapho abesifazane basebenzako bahileleka khona, bayavuma futhi baze babonise ukuthi babonise ukugcoba okunempilo.
Ukugcoba umzimba kungokwemvelo, lapho uhlangothi olukhululekile lwe-nail lunikezwa ukuma, kuvumelaniswe nokuma kwesibhamu, futhi ubuso bepuleti buboshwe.
Abaningi bakhetha umuthi wesiFulentshi, obheka imvelo encane, kodwa enhle kakhulu.
Abaningi besifazane abanelisekile ngemibala ye-pallet yemvelo, kodwa sebenzisa i-varnishes enemibala nazo zonke izinhlobo zezinhlobiso ze-nail ukuze zenze isithombe sabo.
Abangane abangcono kakhulu bamantombazane bangamadayimane
Ukukhanya okumangalisayo kwalawa matshe kuyamangalisa. Imisebe yokukhanya, ephikisiwe ebusweni bodayimane, igxila njalo, ngakho-ke umhlobiso wezipikili ezinamahloni ubukeka buhle kangaka futhi buhle kakhulu.
Futhi uma amadayimane e-jewelry, ngokuvumelana nezidingo zokuziphatha, kufanelekile ukugqoka ngezikhathi ezikhethekile nangemva kuka-17 ntambama, "abafowabo abancane" bangasetshenziswa njengendwangu yokwakhiwa kwezipikili nganoma isiphi isikhathi sosuku, ngenkathi bebona isilinganiso nesitayela sokusebenza kahle.
Ukuhlobisa kwezipikili ezineziqu ze-sequin sekuvele sekudala. Abaphathi bezinsipho banikela ngokuvame ukuhlobisa ngalendlela ngendlela engaphezu kweyodwa, okungajwayelekile ukuthi kunezipikili ezimbili ngakwesandla esisodwa.
Ama-sequin ahlukaniswa nobubanzi bezingqimba zawo. Amancane kunawo wonke abonakala njengothuli oluvuthayo, lapho inkosi ifafaza khona iminwe yamakhasimende, futhi amakhulu kunawo wonke afana ne-paillettes, uma usebenzisa ama-pipe ama-fat and free.
Inani elidlulele lokubukeka kwe-blyostok libuhlungu futhi lingase libonise ukuntuleka kokunambitheka ku-fashionista noma inkosi yayo. Okuhlukile kungenziwa kuphela kumcimbi weNyaka Omusha noma uma isithombe sonke siphendulwa ngesitayela sokuqala, lapho izipikili ezikhazimulayo zingena kuyo ngendlela engcono kakhulu.
Ubuhlalu, amahlumela namaparele
I-Piquancy kuya esithombeni izonikeza ubucwebe kusuka ebuhlahleni namaparele amancane. Kulabo besifazane abaningi, sikhuluma ngezindlela zokulinganisa zokwenziwa komzimba, kodwa abesifazane abafana abancane bangazibandakanya ngezinto zokwakha zemvelo.
Ochwepheshe batusa ukusebenzisa lezi zindwangu ezinzima nezindlala ezinzikhonkwane ezinamandla futhi ngezikhathi ezikhethekile, isibonelo ngosuku lomshado noma eminye imikhosi ebalulekile, njengoba umphumela womsebenzi wokubuyisa wenkosi ungase ube yingozi kakhulu.
Ngokuthuthukiswa komkhakha wezobuhle, akudingeki nje kuphela ekutheni u-aesthetics of manicure, kodwa futhi ekhula isikhathi eside, ukhula. Uma amatshe angokwemvelo noma yokwenziwa kwamaparele asetshenziselwa ukuhlobisa izipikili, kungcono ukhethe i-gel varnishes nama-gel ukuthi aqine ngaphansi kwesibani se-UV, esikhundleni sokugqoka kwe-nail evamile.
Ama-sliders, stickers, izinguqulo nama-Ribbon
Indlela elula futhi esheshayo yokwenza umuthi okhangayo - sebenzisa izigqoko njengesihlobiso sezipikili. Ifilimu elincane elincane le-polymer eliphethe iphethini lihlukaniswe nesisekelo sekhadibhodi ngethonsi yamanzi afudumele nama-tweezers.
Ifakwe esitokisini se-nail ehlanganiswe nengqimba eyisisekelo se-lacquer, kufanele ihlanganiswe ne-varnish evikelekile ephezulu.
Ukusetshenziswa kwalabo abashintshayo noma ukuhumusha kuveza umphumela obonakalayo wezobuciko ngezandla.
Izitika zezipikili ziyizicucu zefilimu ye-polymeri, iphepha elingaphansi kwephepha, ngokubambisana, okusetshenziselwa ukuhlobisa izipikili. Ukusetshenziswa kwezinto zokugqoka ukuhlobisa yonke indawo yeplate akunakwenzeka futhi kungavamile ukujika kahle ngenxa yamapulangwe afomu.
Kulo mkhuba, izitika ezinjenge-ribbons nezintambo. Kodwa lokhu akufanele kusetshenziswe kabi, ngoba ukudlula kwemidwebo enhle kakhulu yalo mhlobiso kungangena ekuphikisweni kwesitayela nesithombe esijwayelekile, izingubo, izinwele.
Umhlobiso ngaphandle kwemihlobiso
Ungakwazi futhi ukuhlukanisa imithi yakho ngaphandle kwemicu, ihlume kanye nezici. Ukudweba izipikili ezinamabala ahlukahlukene kungenzeka ngisho nantombazane engenawo amakhono obuciko, uma i-stencils ekhethekile iseduze.
Amaphethini anqunyiwe nawo ayenziwe utshwala noma isilawuli esidluliwe ngaphambili ukuze ususe i-stick orange or piece of foam raber, uboshwe ngamanothi, kuze kube yilapho isikhumba soma. Bese ubeka ungqimba oluphezulu lokuvikela we-lacquer ecacile.
Kulesi simo, imibala ye-varnish kwezinye izindawo ixutshwe, okuvumela ukuthi uzuze ama-shades athakazelisayo nokushintshanisa kombala okuhambelanayo. Ngakho-ke, ungangezela isitha sakho esithombeni ngaphandle kokusebenzisa imihlobiso ye-nail.
Umkhuba wanamuhla - izinti ze-fimo ne-stucco
Ukwakhiwa kwezipikili ezinokusetshenziswa kwezintambo ze-phimo kuthandwa amantombazane amancane kanye nentsha. Ama-tubulum bright polymer afana bands ukugeza.
Ukuze usetshenziswe emsebenzini, i-blade enhle ebucayi ikhipha ipuleti elihle kunazo zonke le-wand futhi ithola uhlangothi oluthile oluthile lwezithelo, imbali, iphethini ye-geometri, i-butterfly, njll.
Futhi, kusukela ezintweni ezikhethekile ze-polymeric ngokubunjwa noma ukugxila, izibalo ezintathu-ntathu zanoma yikuphi ukuma ezidalwa, ezisetshenziselwa ukuklama izipikili.
Ukubuyekeza kwabathandi be-nail design
Abaphathi be-nail service, abanamakhono afanele kanye nolwazi lomsebenzi, bayakwazi ukusebenzisa noma yikuphi i-whim yeklayenti yabo. Kodwa akuzona zonke izihambeli ze-beauty salon ezikhetha ukucatshangelwa okuyizinto eziyinkimbinkimbi ezinzikhonkwane zakhe, ngoba amacala uma kufanelekile akwenzeki njalo, futhi empilweni yansuku zonke, ama-roses amaningi akhunjiwe nokuhlakazeka kwamatshe ayigugu ezipikili kubonakala kakhulu.
Ukusetshenziswa okulinganiselwe ngezimhlobiso ezikhethiwe kahle kubangela ukuvuma ukubuyekezwa kusuka kumasikethi kanye nochwepheshe bezintambo.
Ikhwalithi nokuphepha kwekhono akuxhomeke kuphela ekuhlobheni okhethiwe, kodwa ekugcinweni kobuchwepheshe kanye nekhwalithi yezinto zokwakha, kanye nesimo semvelo sezipikili, ngakho-ke, impendulo yamakhasimende ephikisanayo ngokuthandwa kwezindlela ezithile zokuhlobisa akufanele ithathwe ngokoqobo.
Nail polish, ucingo kanye ugqozi
Izinhlobonhlobo zezindwangu kanye namathuba amaningi okusebenzisa i-nail polish aphefumulelwe hhayi kuphela ukudala umuthi. I-heroine yevidiyo ethandwayo mayelana neLatuteny isebenzisa i-lacquer ebomvu ukuhlobisa izicathulo zezicathulo, kodwa izimo zokudala zaqhubeka kakhulu ekuziboniseni kwabo kokudala.
Umthamo wamabhodlela anemibala yombala inkulu kakhulu ngisho nakwezindlela ze-fashionistas zokwenza umuthi nokuhamba ngezinsuku ezingu-3-4. Ukusebenzisa i-varnish yombala ofanayo kungaba mnandi noma ecasulayo, ngakho ibhodlela elinombala onyanyekayo lingama izinyanga ngisho neminyaka ngaphandle kwesidingo sokuqeda izinsuku zayo ngokungazinaki emanzini okudosa.
Ngakho-ke, izimo zokudala ezinokusetshenziswa kwe-master's veinishes and ornaments for nails ukuze zenze imisebenzi yangempela yobuciko. Ngempela, i-varnish ephakeme kakhulu ayiyona eshibhile, futhi ukulahlekelwa imali akukona esikhwameni samantombazane amahle.
Ubucwebe obenziwe ngetambo kanye ne-nail polish etholakalayo kwi-intanethi ukuthandwa kohlobo lwe -viral. Kulezizinto zokwakha, izingcweti zenza ubucwebe nezikhumbuzo, ama-trinkets angaphakathi nezesekeli zezinwele.
Isilinganiso sokusetshenziswa kwe-varnishes enemibala nemifino yezipikili kufanele kufane nokusetshenziselwa ukuvuna ukudlala.
Ngokwenani elilinganisako bangezela ukuhamba nge-piquancy, ngokweqile bangabhubhisa isithombe sonke nombono omuhle.
Ngakho-ke, inqwaba yokugqoka kanye nezakhi zokuhlobisa kungcono ukuyisebenzisa ukudala umhlobiso ovela ku-nail polish, futhi hhayi ukugcina isitayela se "clumsy".
Amaphethini ezipikili: amathiphu awusizo
Yini okufanele ngiyenze uma ngikhulile insipho eminwe yami emikhulu?
Ukusabalala zokudlala: GOST, Uhlolojikelele, izinhlobo, amanani
Indlela hlola izimpawu zokubhala. imitsetfo yetimphawu tekubhala